Habka ugu Fiican ee loo Aqoonsado Xakamaynta Botnet ee loo yaqaan - Semalt
Badbaadada Botnet waxay awood u leedahay inay kudhacdo masaafo iyo goobo kala duwan. Taas macnaheedu waa in shabakadda zombies iyo qaanadaha ay si fudud ugu dhimi karaan nidaamyo badan oo adduunka ah. Awoodgani waxa uu ka dhigaa botnet dhibaatada caalamiga ah, dadaalka ka soo horjeeda wuxuu u baahan yahay in la qaado sida ugu dhakhsaha badan. Frank Abagnale, oo ah Semalt Maamulaha Guusha ee Macaamiil, wuxuu sharxayaa in cybernetnet uu yahay shabakad kombiyuutarada cudurka qaba. Waxay ka koobanyihiin oo ay hoos yimaadaan xakamaynta buuxda ee spamer, hacker ama weerar. Dhamaan qalabka shakhsiyadeed ee qayb ka ah shabakadan waxaa lagu magacaabaa bots - compro macchina fotografica analogica.
Botnet detection iyo ka hortagiddeeda:
Xaqiiqda ah khayaanada botnet ma ahan mid fudud marka loo eego in ay ku shaqeeyaan iyadoon noo fasixin wax war ah oo ku saabsan duruufaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo lagu ogaan karo loogana hortagi karo si fudud.
1. Gaadiidka IRC
Ilaha IRC-ga waxaa ka mid ah botnets iyo botmasters oo isticmaala IRC si ay ula xiriiraan midba midka kale
2. Gaadiidka joogtada ah ee socdaalka SMTP
Gaadiidka joogtada ah ee socdaalka ee SMTP waa in la sameeyaa sida ugu dhaqsaha badan.
3. Qalabka Anti-Botnet
Qalabka anti-botnet waa kuwo wanaagsan waxayna hubiyaan natiijooyinka tayada sare leh. Daaqadaha aan la filayn ayaa sidoo kale ah calaamad muujinaysa khayaanada faafa.
4. Kumbuyuutar qallafsan
Kumbuyuutar gaabis ah ama qalab mobile oo leh adeegsade sarreeya ama adeegsiga xasuusta ayaa ah calaamada khayaanada khayaanada botnet
5. Kacbada baabuurta
Baaskiil wadida waxaa ku jira Port 6667 oo aan u adeegsaneyno IRC, Port 25 oo aan u adeegsaneyno emaylka spam, iyo Port 1080 oo aan u adeegsaneyno serverka wakiilka
6. Farriinta qaaska ah
Fariimaha farqiga ah lama diro dadka isticmaala. Dhab ahaantii, waxaa loo soo diray bots
7. Arrimaha la xiriira helitaanka internetka iyo xawaaraha
Haddii aad la kulanto arrimo badan oo la xidhiidha helitaanka internetka iyo xawaaraha, fursadaha ayaa ah in qalabkaaga ay soo weerareen khayaanada faafa.
8. Shabakada Shabakada
Hawlaha iyo hawlaha shabakadaada waa in si joogto ah loola socdo
9. Noocyada software-ka
Dhammaan barnaamijyada kombiyuutarkaaga ama qalabka mobile-ka waa in la cusbooneysiiyaa gaar ahaan sharuucda amnigaaga iyo barnaamijyada ladagaallanka lidka ku ah
Isticmaalayaasha waa inay ka ilaaliyaan qalabkooda khatarta khatarta sare leh iyagoo rakibaya barnaamijyo iyo barnaamijyo khuseeya
Sameynta shabakada internetka ee khatarta botnet online:
Boorama ayaa la sameeyaa marka kumbuyuutarka ama qalabka mobile-ka uu ku dhaco fayruus ama nacfi. Tani waxay kumbuyuutarada u xakameysaa in qalabkani fog yahay, oo aadan ka helin wax ku saabsan. Qeybaha kumbuyuutarrada ama kuwa weerarka ku shaqeeya ee xakameynaya botnets waxaa loo yaqaan 'bot guards' ama botmasters. Weerar ama kambiyuutaro isticmaalaan botnets sababo kala duwan; badankoodu waxay isticmaalaan bots iyo fayrusyada cybercrimes. Arjiyada ugu caansan ee botnet waa weerarka adeegga diidmada, ololaha e-mail, macluumaadka tuugada, iyo adware ama spyware.
Sidee ayaa weerarrada ciridka ee botnet loo bilaabaa?
Weerarrada botnet waxay ka bilaabmaan shaqaaleynta qorista. Botmasters waxay qorayaan qoryaha si ay u faafaan gooryaanka, fayrasyada, iyo cambaareynta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu jabiyo oo la qaado tiro badan oo kombiyuutar kuwaas oo laga yaabo ama aanay ku jirin barnaamijyada antivirus. Fayrasyada botnet waxay ku xiran yihiin qalabkaaga waxayna koontaroolaan server-yada. Laga soo bilaabo halkaas, weeraryahannadu waxay la xiriiri karaan oo ay xakamaynayaan qatarta, iyaga oo u sameeynaya shaqooyin gaar ah. Marka bacaha ay gaaraan cabbirka loo baahan yahay, xoola-dhaqatadu waxay ka faa'iideysan karaan botnets si ay u fuliyaan weerarro gaar ah, sida server-ka xad-dhaafka ah, xayiraya macluumaadka shakhsiyeed, riix dacaayada iyo dirista email-ka spam.